Uhlengahlengisa njani iiNdawo eziSekhohlo nasekunene kwiLizwi
1 5 Emva
Qinisekisa ukuba uMlawuli ubonakala ebonakalayo.
Khetha ibhokisi yomlawuli kwiqela lokubonisa leSithuba sokujonga ukubonisa iirula ukuba ayikabonakali.
Mbini 5 Emva
Khetha nawuphi na umbhalo.
Naluphi na utshintsho olwenzayo kwii-indents lusetyenziswa kwisicatshulwa osikhethileyo.
3 5 Emva
Hambisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwe icon ye-Indent yasekhohlo kuMlawuli (i-icon ephezulu), bamba iqhosha lasekhohlo le mouse, kwaye urhuqe (ushukumise) imouse ekunene uhlengahlengise umda womhlathi wasekhohlo.
ILizwi libonisa umgca othe nkqo ukukubonisa apho umda womda wasekhohlo womqolo uya kuba khona.
Khupha iqhosha lasekhohlo le mouse xa wonwabile ngendawo yemida yomhlathi wasekhohlo.
5 5 Emva
Hambisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwe icon ye-Indent yasekunene kuMlawuli, bamba iqhosha lasekhohlo le mouse, kwaye urhuqe (ushukumise) imouse ngasekhohlo ukuze uhlengahlengise umda womhlathi olungileyo.
ILizwi libonisa umgca othe nkqo ukukubonisa apho umda womhlathi omtsha ulungile.
Khupha iqhosha lasekhohlo le mouse xa wonwabile ngendawo yomda womhlathi olungileyo.
Yintoni i-neomycin kunye ne-polymyxin
indlela yokuncamathisela itwitter
isetyenziselwa ntoni ipakethe yedosi yedrako
Ngaba i-topamax ibangela ukulahleka kweenwele
yeyiphi i-antibiotiki yosulelo lwesono
yenziwe ngantoni i-melatonin